N’izu ụka abụọ gara aga, e gburu ndị agha mba Amerịka anọ na Niger.
Ịhe gbara ndị mmadụ gharịị karịsịa bụ na onye isi ala mba Amerịka, Donald Trump, bụ onye ụwa niile maara ọfụma dịka Oji Twitter Ekwu, ekwughị okwu ọbụna gbasara ọnwụ ndị soja ahụ.
Trump atụpụghị ọnụ na Radio. Ọ tụpụghị ọnụ na Televishọnụ. O kwughị cham site n’ama saiba Twitter, ebe ọ na-adịwaga etinye ọnụ n'okwu ọbụna gafere nu, ma nke nwere isi, ma nke na-enweghị isi.
Nke a mere ọtụtụ ndị nta akụkọ jiri gbawa ya ajụjụ, iji chọpụta ịhe ọ maara gbasara ọnwụ ndị soja anọ ahụ.
Otu n’ịme ndị ahụ e gburu n’agha bụ Sagent La David Johnson, onye anyị nụrụ na Trump akpaghị agwa dịka onye ṅụjuru mmiri ara afọ mgbe ọ kpọrọ nwụnye Johnson n’ekwe ntị maka isepuru ya maka ọnwụ di ya.